May 2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
တစ်ခါတုန်းက တဲအိမ်လေးတစ်အိမ် ရှိတယ်။
အဲဒီတဲအိမ်လေးမှာ အိမ်ရှင်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ အိမ်ရှင်ရဲ့ နာမည်က
ဦး……………ဖြစ်တယ်။ အိမ်ရှင်က ဘဝကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတယ်။
ဘဝမှာ ဗိုက်ပြည့်ရုံ အစာစားနိုင်ရင် စားဖို့အတွက်လုံလောက်ပြီ၊
Su Su Nway's status update. Su Su Nway added2new photos — with Nyi Han and 18 others.
၁၉၉၄/၉၅ ခုနှစ်က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ထုံးဘိုကျေးရွာတွင်
ကော်ဖီစိုက်ခင်းစီမံကိန်းအတွက်ဟုဆိုကာ ရွာသူရွာများပိုင် ခြံမြေများကို အဓမ္မသိမ်းယူ၍ ဦးလှသန်း ဆိုသူကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ချထားပေးခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့သိမ်းယူစဉ်က ခြံမြေများအပေါ်ရှိ စိုက်ပျိုးသီးနှံများနှင့် ခြံမြေများအတွက်ပါ မည်သည့်လျော်ကြေး၊ နစ်နာကြေးမှ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
အာဆီယံအမျိုးသမီး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဖိုရမ်တွင် မျိုးစောင့်ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေး
ပုဒ်မ ၄၃၆ပြင်ရေး လက်မှတ်ထိုးစာရင်းများ တောင်းယူခြင်းသည် ရပ်ရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အတွက်ဟု ဦးရဲထွဋ်ပြော
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ် (၂)ရက် အတွင်း (၃) သိန်း နီးပါးရရှိ
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်မှ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်သင့်ဟု သမ္မတပြော
ရွာမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ငယ်ငယ်တည်းက ပေါင်းလာခဲ့တဲ့ အေးနိုင်ဆိုတဲ့ ဘော်ဒါတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူက ကလေးတည်းက နိုင်ငံတကာရေးရာတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်။ လူစုံရင် (အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သိပပ္ပံပညာတွေ၊ စက်မှုလက်မှုတွေ သူသိသမျှ ရှယ်ယာတော့တာပဲ။
ကဲ ပညာရေးဝန်ကြီး ဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်
Ko Myo's photo.
တင် ပေးစေချင် ပါတယ်
ဘဝကလဲ စက်ဘီးတောင် မရှိသေးလို့
Myo Swe Than's status update.
Myo Swe Than added2new photos.
Clean Tex က ညီလင်းဆက်က ၁၉၇၇၊မေ(၂၉) ဒီလိုနေ့ မျိုးမှာ
ဒေါက်တာဘမော် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ကြိုးကြိုးစားစားပြောရှာတယ်
မှတ်ချက်တွေက ဒေါက်တာဘမော် ချောလိုက်တာတဲ့
နေတိုးနဲ့ တူတယ်တဲ့၊ ဘယ်ဌာနကလည်းတဲ့၊
အခုလည်း ချောတယ်တော့ မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်၊
နေခဲ့ဦးတော့ ... ယုဇန
သံလျင်တံတား အမှတ် (၂) ဆီက
ဓါတ်ကြိုးကြီးတွေ ထမ်းထားတဲ့ တာဝါတိုင်များ
တိမ်မည်းတွေ ဖုံးလွှမ်းခံလိုက်ရတဲ့ လတစ်စင်းနဲ့အတူ
ဖဲကြိုးဝါတွေ မစည်းနှောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ယုဇန
နေ… နေခဲ့ဦးတော့ …
မြန်မာပြည်တွင်ခေတ်အဆက်ဆက်တက်လာသော သမ္မတများသည်.. .ကောင်းကြောင်း..အတုယုစံပြုစရာစိတ်ထား. ကိုယ်ကျင့်တရား များကို မည်သည့် ကျမ်းဂမ်လည်းမ၇ှိသလို စာအုပ်လည်းမရှိ၊ ဖတ်ဖူးခြင်းလည်းမရှိလို့ ဟုဆင်ခြေပေးအံ့....။
မင်းပြားတွင် ကလေးငယ်များ သွေးလွန်တုတ်ကွေးအဖြစ်များနေ
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ တပ်ဖွဲ့တွေ အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဟုဆို
တရုတ်ယွမ်ငွေ ၄ဝဝဝဝ ဖြင့် ဇနီးမယားအဖြစ်ရောင်းစားခဲ့သူနှစ်ဦးအား ထောင်ဒဏ် ၁ဝနှစ်ချ
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၇၂လမ်းတွင် ကတ်ကြေးနှင့်ထိုးသတ်မှု ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းသဲလွန်စဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုဖမ်းမိ
ဖမ်းဆီးခံထားရသော SNLD ကျေးရွာပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြန်လွတ်
ရင်သွေးငယ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို တီးခေါက်မိကြပါစေ
ဒီခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီး ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ အတွေးရလာရသည့် မူရင်းအခြေခံကြသူဆရာမ ခင်ခင်ထူးအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါသည် ။ ညက ဆရာမခင်ခင်ထူးရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ အခွေလေးကို နားထောင်မိရာက ဆရာမပြောသွားသည့် စကားလုံးများထဲမှ ဒီဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်လေးကို ရခဲ့ပါသည် ။ ဒီအတွက် ဆရာခင်ခင်ထူးအား လေးစားစွာဖြင့် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဒီဆောင်းလေးကနေ မှတ်တမ်းတင်ပြောကြားပါရစေ ဆရာမရှင့် ။
Author: lubo601 | 10:34 PM | No မှတ်ချက် |
ဂျပန်တွင် အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့်မှ စာမေးပွဲ ဖြေရသည့်အကြောင်း
YoYarLay with Cherry Hlaing and2others
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ၃ တန်းအရွယ် (အသက် ၉ နှစ် အရွယ်) အထိ ဘာ စာမေးပွဲ မှ ဖြေစရာ မရှိပါဘူး။
ကျောင်းတက်ရပါတယ်။ စာလုပ်ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စားမေးပွဲ မဖြေရပါ ဘူး။ အကြောင်းကတော့ ကျောင်းတက်တဲ့ ပထမ ၃ နှစ်တာကာလရဲ့  မျော်မှန်းချက်ဟာ ပညာမဟုတ်ပဲ အကျင့်စာရိတ္ထဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်၊ နာမ်၊ ခန္ဓာ၊ အာယတနတည်းဟူသော သံသရာစက်ကို လေးတန်သောမဂ်ဖြင့် ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးတော်မူပြီး၍ အရဟံတည်းဟူသည့် ဂုဏ် တော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော ဘုရားရှင်၏အဆုံးအမအတိုင်း ကိလေသာတို့မှလွတ်ရာလွတ်ကြောင်း ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အား ထုတ်လိုပါသော်ငြား သဒ္ဓမ္မဂဝေသီ ဘုရားပစ္စေကအရိယာတို့ ရှာမှီး၊ရညောင်း သူတော်ကောင်း တရားနှင့် မယဉ်ပါးသေးသည့် ဆြာဒင်မှာ
Author: lubo601 | 3:09 PM | No မှတ်ချက် |
May 28, 2014 at 1:53pm
ဟွာလေ. . . . သူ့ရုပ်ထု ပုံကြီးကြည့်ရတာ
ကျနော့ ဥယျာဉ်တော် သို့ အဝင်
ကျနော် သူ့မျက်လုံးကို စိုက်ကြည့်တော့ - ပြာဝင်းလဲ့ရောင် မြင်ရတယ်။ အပြာ ဟာ ကောင်းကင်။ ဝင်းလဲ့မှုက ကြယ်စင်။ ကောင်းကင်နဲ့ ကြယ်စင် ဆိုတာ မြေလွှာပေါ်က ခြေတစ်ဖက် ကြွရင် လှလှပပ ကကြတဲ့ ကညာပျိုတွေ ဖြစ်တယ်။ စည်းလိုက် ဝါးလိုက် ဂီတရဲ့ အလစ် အငိုက် မှာ ခြေဖမိုးသားလေး လက်လို့။
*** အမုန်းစိတ်၏ ထွက်ပေါက် ***
Author: lubo601 | 3:08 PM | No မှတ်ချက် |
True Man was tagged in Ko Ko Swe's photo.
““ကိန္နရာရှမ်း”” ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ၃ ဦးသေ၊ ၂၆ ဦးဒဏ်ရာရ
ကားဖြင့်တိုက်ဟန်ပြု စနောက်ရာမှ ၈နှစ်အရွယ်ကလေး ကြိတ်မိသေဆုံး
တိုတိုနှင့် ထိရောက်သည့် မေးခွန်းများမေးရန် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ တိုက်တွန်း
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် တည်ဆောက်နေသည့် ပြည်သူဟစ်တိုင် ဇွန်လတွင်ဖွင့်မည်
ပြည်မြို့တွင် အနှေးယာဉ်လုပ်သားများ ဆိုက်ကားနင်း၍ ဆန္ဒပြ
ကော်မရှင်၏ သတိပေးစာ၊ လူထုမျက်နှာ မူရေးနှင့် လူထုခေါင်းဆောင်
Author: lubo601 | 2:45 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 9:19 AM | No မှတ်ချက် |
Thanlay Ko's status.
“ဥမ္မာဒန္တီ ” (ရုပ်အဆင်းကို ပေးလှူသူ)
အ၀တ်သင်္ကန်းကို လှူဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား ရုပ်အဆင်းကို ပေးလှူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါပေ၏။
အလွန် လှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါစေ၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာ အ၀တ်အစားမရှိဘူးဆိုလျှင် ကြည့်ရတာ အင်မတန် အရုပ်ဆိုးသွားပါတယ်။ အရုပ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါစေ၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ် တဲ့ အ၀တ်တန်ဆာကလေးတွေကို ဆင်မြန်း ၀တ်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ရှုချင်စဖွယ်ဖြစ်လာ
အတွေ့အကြုံ ၊ ကျွမ်းကျင်မှု ၊ နှင့် ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး
ကျွန်မ အသက် ၂၈ နှစ်အထိ မြန်မာပြည်မှာ နေခဲ့ပါတယ်။ သင်္ချာနှင့်အင်္ဂလိပ်စာကို သူငယ်တန်းကတည်းက သင်ခဲ့ရပြီး အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ပြဌာန်းစာအုပ်များကို အသုံးပြု၍ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးပညာမဟာဘွဲ့ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုတချို့ ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တော်တော်များများကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ကျွန်မ ၂၈နှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားသားတယောက်တလေနဲ့မှ အင်္ဂလိပ်လိုစကားမပြောဖူးခဲ့ပါ။ အလွန်တရာ ပြည့်စုံလှသော မိသားစုမှ မွေးဖွားခဲ့ခြင်းမဟုတ်သော၊ အလွန်တရာဥာဏ်ရည်မြင့်မားသူတစ်ဦးလည်း မဟုတ်သော ကျွန်မကို မြန်မာပြည်၏ သာမန်လူတန်းစား (Average population) ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သူတစ်ဦးအဖြစ် ဦးစွာမှတ်ယူပြီး ကျွန်မဘဝ၏ပညာရေးနှင့်ဆက်နွယ်သော အတွေ့အကြုံအချို့ကို မျှဝေလိုပါတယ်။
New Myanmar News's photo.
လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်လောက် က လူ တစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ သွားခဲ့တယ်.
အဲ့ဒီမှာဘဲ သူထိုင်တဲ့ ထိုင်ခုံကနေ တခုခု က စူးသလို ခံစားလို့ သေချာ
ကြည့်တော့ ဆေးထိုးအပ် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရတယ်. အဲ့ဒီ အပ်နဲ့အတူ သူ
တွေ့တာ ကတော့ "ခင်ဗျား HIV ပိုးအကိုက်ခံရပြီ" ဆိုတဲ့ စာလေးပါဘဲ !
ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသဖွယ် လုပ်ကိုင်မှုများရှိလာ
သမ္မတက ဥပဒေပြုရန်မလိုဟုဆိုသော စာချွန်တော်ဥပဒေကြမ်းကို ပြဋ္ဌာန်းရန် လွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်
ခရီးသည်(၂)ဦးက အငှားယာဉ်မောင်းကို လည်ပင်းညှစ်ပြီး ယာဉ်ကိုလုယူသွားသဖြင့် အရေးယူ ပေးရန်တိုင်တန်း
အရှိန်မထိန်းနိုင်သောထော်လာဂျီယာဉ် ချောက်ထဲသို့ထိုးကျတိမ်းမှောက်၍ ၂ ဦးသေ၊ ၁၃ ဦးဒဏ်ရာရ
လူကုန်ကူးမှု၊ လိင်ဆက်ဆံမှုဖြင့် ထိုင်းသံဃာတော် ၅ ပါး ဖမ်းဆီးခံရ
ဂျပန်တွင် အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့်မှ စာမေးပွဲ ဖြေရသည့်အြေ...
ဟာသ အသုတ်စုံ (၈)
တစ်နေ့ နှစ်ထောင်ကိုကိုမောင် (ဗြိတိသျှကိုကိုမောင် ...
ကုလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ့၏ ပထမဆုံးသော အမျိုးသမီးစစ်ဦးစီးချုပ...
"ဗုဒ္ဓဝါဒ နှင့် ဗြဟ္မဏဝါဒ ခွဲခြားပုံ "
ဆင်ခြင် နိုင်ကြပါစေ ဗျာ . . .
ထူးအယ်လင်း နဲ့ မီးမီးခဲ
ဖိနပ်တိုက်ခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲသား ကောင်လေးဟာ ဘယ်သူလဲ...???
ပန်းသီး အပင်နှင့် တူသော
အနုပညာရှင် ဦးခင်မောင်ရင်သို့ ရသအလင်း၏ ဂုဏ်ပြု ဂါရဝ
သားရဲတိရစ္ဆာန် မူလစိတ်နှင့် ဘုန်းကြီးခေါင်းဆောင်
အောက်ပါတို့ကို သေချာစွာ ဖြေဆိုပါ
ရ ... ရထားကြီး ... ပျော်ပျော် စီး ........
*** အထက်တန်းစားစိတ်နှင့် အောက်တန်းစားစိတ် ***
မပြောင်းချင်လို့မရ မောင်သက်မွန် ( ငါ န်းဇွ န် )
လိင်အင်္ဂါ ကြီးအောင် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိ...
သိန်းငှက်တစ်ကောင်လို ကောင်းကင်မှာပျံသန်ဖို့ အဆင်သင...
ဘာလီကျွန်းက မျောက်များ Eagle Breeze
"ပရဟိတကာ/ ချုပ်ကြီး ဦးကျော်သူထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ"
30 Lessons from Mark Zuckerberg
သိထားသင့်တဲ့ နည်းလေးများ
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၁၈-၅)